PZ Day Trading Forex Tusiyaha - Forex Muujiyeyaasha Download
Home MT4 Muujiyeyaasha PZ Day Trading Forex Tusiyaha
PZ Day Trading Forex Tusiyaha
The PZ Day Trading Forex Tusiyaha ka barta eber ganacsiga. Waa tilmaame scalping a. Waxa kale oo loo isticmaali karaa ganacsi intraday. Waxaa loogu talagalay in lagu ogaado dib isbeddel hab zig-zag. tilmaame waxay leedahay ma ranji ama rinjiyeynta dib. Waxaa la isku geynta waa barnaamijkii in fal si dhakhso ah in dhaqdhaqaaqa suuqa oo ay isticmaalaan falalka qiimaha in la siiyo calaamadaha. Waxay leedahay oolnimada ah ee ku saabsan 90%-95%. Sidaas awgeed waa tilmaame Aamin ah si ay u isticmaalaan in aad ganacsi.
Waxaa loogu talagalay in ay ka shaqeeyaan oo dhan dhufto ee MT4. Waxaa loo isticmaali karaa si ay ganacsi la isticmaalayo mid ka mid ah waqtiga, laakiin tan waxaa loogu talagalay scalping, waxaa fiican haddii la isticmaalo iyadoo muddeeynta halkan ku cadna yara adag ee M5-M15.
The Trading Day PZ waxaa loo yaqaan tilmaame aad u wajiyo badan oo ku xiran tahay breakouts dhererka hagaajin iyo goobaha ciriiriga on danbow Donchian ama guntooda. Si kastaba ha ahaatee tilmaanta kaliya bandhigayaa warbixin muhiim ah iyadoo junk Maxaynu-kana laftiisa waayo,.
tilmaame ayaa mas'uul ka ah formation of War fallaadhihii buluug iyo casaan. fallaadho ugu adeegaan sida calaamadaha ganacsiga ah. arrow buluuga ah ayaa muujinaysa in qiimaha suuqa ayaa lagu wadaa waayo isbedel fiican halka arrow cas ayaa muujinaya in qiimaha suuqa ayaa lagu wadaa waayo isbedel bearish. In muddo gaaban ah fallaadhihiisii ​​buluug muujinaysaa in qiimaha suuqa ayaa lagu wadaa inay soo sara kaco halka arrow cas ayaa muujiyay, in qiimaha suuqa ayaa lagu wadaa in ay hoos u.
lagugu tuday sawirka.1. The PZ Day Trading Tusiyaha geliyo gal EUR / shaxda USD ah.
tilmaame waxaa sidoo kale loogu talagalay in lagu eego geedisocodka ay signal u gaar ah. Waxaa dhab ahaan u barto oo ku saabsan calaamadaha u gaarka ah. Marka waxay siinaysaa calaamadaha ay, waxaa ka hor tagaa oo lafaguraa signal iyo bandhigayaa warbixin ku saabsan geeska bidix ee kore ee shaxda ganacsiga ah. Sidoo kale waxaa jira a line guduud dhibcaha in barbaro line ka faa'iido ee ganacsiga kasta la saadaaliyo in ay noqon. Waxa kale oo jira waa calaamadda guduudan oo muujinaya faa'iidada u tahay marka la eego dhibcaha ganacsiga kasta.
Sida loo dhigo iyo xirfadaha dhow la isticmaalayo PZ Day Trading Tusiyaha.
ganacsade waa in ay ahaataa mid aad u dhawrsataan ku saabsan fallaadhihii casaan iyo buluug tan iyo markii ay yihiin calaamadaha ganacsiga ah. Si kastaba ha ahaatee, ganacsade ah ayaa sidoo kale laga yaabaa in ay ahaanayta tilmaanta iyo dhigay qaylodhaan ku saabsan si isaga ama iyada waxaa keentay karaa mar kasta oo ay jirto calaamad ganacsi oo.
Marka u geliya Xirfado ganacsade ah waa in ay isticmaalaan statistics taariikhiga ah ee geeska top-bidix ee shaxda in ay meel isaga ama iyada joogsato. faa'iido ka qaadataan waa in lagu rakibaa sida ay taariikhda ku guuleystay, halka khasaare joogsiga waa in lagu rakibaa sida ay taariikhda u furaysaan. Tusaale ahaan haddii statistics taariikhiga ah waxa ay muujinaysaa guusha a 85 %( 204 ka mid ah 240), ganacsade ah waa in meel uu ka qaaddid oo faa'iido at 204 farta ka amarka. Haddii statistics taariikhi ah ka hor iyo shows tagaa laga badiyay 5% (36 ka mid ah 240), ganacsade ah waa in lagu wadaa isaga ama iyada khasaaro stop at 36 dhibic ka amarka. Si kastaba ha ahaatee tan iyo wakhtiyadii qaar ka mid ah Somailand waxaa laga yaabaa inaadan u oggolaan in aad u dhagan istaago khasaare stop la dhigay kartaa 100 Dhibco (10 Liiska Forbes).
Saarid iibiyay a: ganacsade ah waa meel si iibiso ka dib markii formation of arrow cas.
Saarid iibsan a: ganacsade ah waa in meel buy ka dib markii formation of fallaadha buluug.
Tusaale gelinayn amarada la isticmaalayo PZ Day Trading Tusiyaha.
PZ Day Trading Forex Tusiyaha waa Metatrader a 4 (MT4) tilmaame iyo nuxurka tilmaame Forex ee waa in aan baddalno xogta taariikhda wxbarashada.
PZ Day Trading Forex Tusiyaha siinayaa fursad ay ku ogaan dhegyadii kala duwan iyo astaamaha isbedbeddelka sicirka kuwaas oo aan la arki karin in ay isha qaawan.
Sidee si loo soo dajiyo PZ Day Trading Forex Indicator.mq4?
Download Day PZ Trading Forex Indicator.mq4
Copy PZ Day Trading Forex Indicator.mq4 aad Metatrader Directory / khubaro / tilmaamayaasha /
Right click on Maalinta PZ Trading Forex Indicator.mq4
Tusiyaha PZ Day Trading Forex Indicator.mq4 waxaa laga heli karaa aad Chart
Sidee Xagga Metatrader saar PZ Day Trading Forex Indicator.mq4 4 Chart?
Maalinta PZ Trading
article PreviousNoqo Guru Forex Tusiyaha
Next articleAuto Saadaasha Expert Forex Tusiyaha
AITradeSafe Forex Muujiyeyaasha
Scalper Market Pro 5.5 Forex Tusiyaha
Harmonic Patterns1 Forex Tusiyaha
AITradeSafe Forex Muujiyeyaasha Jan 18, 2019
Scalper Market Pro 5.5 Forex Tusiyaha Jan 16, 2019
Harmonic Patterns1 Forex Tusiyaha Jan 14, 2019
Elliot oscillator Wave Forex Tusiyaha Jan 11, 2019
Madaxweynaha FX Forex Tusiyaha Jan 9, 2019